Muna Kukadzi 2019, VaLin Yuanzhong, aimbova mushandi weChangheng Company, zvinosuwisa kuti akarwara nekenza yemapapu. Mutungamiri wekambani akazivisa vashandi vese muboka rekambani yeWeChat uye akapa mupiro nekukurumidza. Vashandi vacho vakapindawo muchipo uye ...
CORBITION kambani yakapihwa zita remutero unobhadhara kubhadhara muShanghai. Uku ndiko kusimbiswa kweCORBITION tekinoroji, asiwo kudzoka kwevashandi vese veCORBITION kunzanga. Munguva yakapfuura 8th China (Shanghai) International Technology Kunze uye Export Fair, zvigadzirwa zvedu ...
CORBITION Gore Idzva Bato
MuMutambo weChirimo we2020, kuitira kurwisa COVID-2019, CORBITION Kambani yakagamuchira mirairo kubva kuhurumende inokodzera kuronga kutangazve kwekugadzira zvisati zvaitika. Mukushaikwa kwezvinhu zvekushandisa uye vashandi, VaGe Bingda, sachigaro wekambani, vakashanda zuva ...